Posts by Nolosha Tuuga Sweden ugu doqonsan oo lagu xukumay xabsi iyo musaafuris By Jimcale • October 23, 2012Waxaan filayaa in akhristayaasha Somaliska ay si fiican u xasuustaan ninkaan. Waa ninkii bartamaha bishii hore wadada tareenka uga tagay nin cabsan oo uu …
Lacagta TVga oo aan wax laga badali doonin By Jimcale • October 23, 2012Lacagta dadka badani ay necebyihiin ee ay qaado hay’ada Radiotjänst ee lagu bixiyo qarashka telefishinada ayaa dowladu go’aamisay in aan waxba laga badali doonin. …
Soomaalida & Saxaafada Sweden By Jimcale • October 19, 2012Marka aad akhrido mowduucyada ay ka qoraan saxaafada Sweden Soomaalida ayaa waxaa loo kala qeybin karaa labo qeybood. Kuwa dhinaca cunsuriyiinta ayaga warkoodu waa …
Försäkrings­kassan oo baaritaan ku haysa dadka iyo shirkadaha qiyaana sanduuqa caymiska By Jimcale • October 18, 2012Hay’ada caymiska dadweynaha (Försäkrings­kassan) ayaa mudo ka badan 1 sano waxay baaritaan balaaran ku haysay shirkado iyo shaqsiyaad badan oo looga shakisanyahay in ay …
Bankiyada oo joojiyay qabashada lacagta cadaanka ah By Jimcale • October 15, 2012Bankiyada ugu waaweyn Sweden ayaa bilihii la soo dhaafay waxay ku dhaqaaqeen siyaasad ay mudo qorshaynayeen taasoo ah in aan wax lacag cadaan ah …
Wasiirka isdhexgalka oo doonaya in uu xafiisyada dowlada u soo raro Rinkeby By Jimcale • October 9, 2012Wasiirka isdhexgalka Sweden Erik Ullenhag ayaa mowduuc uu ku qoray wargeyska SvD waxa uu ku muujiyay rabitaankiisa in qaar ka mid ah hay’ada dowlada …
Talooyinka caafimaadka oo Af-Soomaali lagu bixinayo By Jimcale • October 4, 2012Dadka xanuunsan ee doonayo talooyinka caafimaadka ee qadka telefoonka ah ayaa hada waxay heli doonaan turjumaano Af-Soomaali iyo Carabi ku hadlaya.
Qaasatan dadka ku nool …
Jaceylkii Cilmi Boodhari iyo Hodan oo lagu soo bandhigayo Sweden By Jimcale • September 29, 2012Xaafada Angered ee ka tirsan Göteborg ayaa bisha Oktober 15-deeda waxaa lagu soo bandhigi doonaa riwaayad xiiso badan oo ku saabsan qisadii jaceylka ee …
Tuugada oo wax ka badala warqadaha biilasha By Jimcale • September 26, 2012Beryahaan dambe waxaa soo batay tuugo ka qaraabata sanduuqa boostada, iyagoo la baxa warqadaha biilasha ay soo diraan shirkadaha, ka dibna isbedal ku sameeya.
Dukaamada Expert oo qasaaray iyo xaraash la samaynayo By Jimcale • September 20, 2012Dukaanka lagu iibiyo qalabka elektorooniga ee lagu magacaabo Expert ayaa qasaaray. ilaa 73 dukaan oo uu leeyahay Expert ayaa irdaha la’isugu dhuftay iyagoo dhamaadka …
Lacagtii imtixaanada Laysanka oo la siyaadiyay By Jimcale • September 16, 2012Lacagta lagu galo imtixaanada laysanka (körkort) ayaa dowlada wax yar ku siyaadisay. Horey ayaa imtixaanka kombutarka (kunskapsprov) waxaa lagu gali jiray 200kr halka kan …
Waa la soo xiray ninkii Johny tareenka u dhigay By Jimcale • September 15, 2012Ninkii nacaska ahaa ee ku kacay ficilka foolxumada ah ee uu wadada tareenka ugu tagay nin ku dhacay, ayaa xabsiga la soo dhigay xalay. …
Idaacada Sweden oo bilowday taxane ku saabsan Soomaalida By Jimcale • September 11, 2012Idaacada Sveriges Radio (SR) ayaa bilowday taxane loogu magacday Sverige och somalierna oo lagu soo bandhigi doono barnaamijka lagu magacaabo KONFLIKT. Qeybtii ugu horeysay ee barnaamijka …
Doorashada madaxweynaha iyo hamiga Soomaalida Sweden By Jimcale • September 10, 2012Maanta waxaa magaalada Muqdisho ka dhacaya doorashada taariikhiga ah ee lagu dooranayo madaxweynaha Jamhuuriyada Soomaaliya. Guud ahaan soomaalida ku nool daafaha caalamka ayaa isha …
Gudoomiyaha SD oo booqday Forserum By Jimcale • September 5, 2012Gudoomiyaha xisbiga cunsuriyada ku dhisan ee Sverige Demokraterna (SD) Jimmie Åkesson ayaa booqasho ku tagay tuulada Forserum ee Soomaalida lagu dhibaateeyay. Åkesson ayaa booqashiisa …
Lacagta TVga oo laga yaabo in canshuur lagu badalo By Jimcale • September 3, 2012Lacagta TVga ee ay qaado Radiotjänst ayaa laga yaabaa in canshuur laga dhigo sida ay ku taliyeen gudi ay u saartay dowlada. Gudigaan oo …
LA YAAB: “Dhuxul ayuu ku shiday jikada” By Jimcale • August 30, 2012Mid ka mid ah caruurta aan la wehlin oo lagu hayo guri ku yaala magaalada Hofors ee gobolka Gävleborg ayaa booliska lagu dacweeyay ka …
Gabar Soomaali ah oo la baadi goobayo [Waa la helay] By Jimcale • August 29, 2012Gabar yar oo 6 sano jir ah oo lagu magacaabo Bushra Khalif oo booqasho ku joogtay magaalada Gislaved ayaa la baafinayaa ka dib markii la …
“Islaamka ha laga mamnuuco Sweden” By Jimcale • August 26, 2012Mid mid ah siyaasiyiinta xisbiga cunsuriga ah ee SD oo lagu magacaabo Pär Norling oo u fadhiya magaalada Bollnäs ayaa ku baaqay in Sweden ay …
Gudoomiyaha degmada Nässjo “Cunsuriyad ma ahan” By Jimcale • August 23, 2012Dhacdadii aan shalay soo qornay ee ku saabsan soomaalida ku nool tuualada Forserum ee ka tirsan kamuunka Nässjö ayaa wali ku sii baahaysa warbaahinta …
Soomaalida oo isaga carartay tuulada Forserum By Jimcale • August 22, 2012Soomaalida ku nool tuulo ka tirsan kamuunka Nässjö oo lagu magacaabo Forserum ayaa waxaa la soo daristay cabsi weyn ka dib markii mudo lagu haayay …
Ciid wanaagsan! By Jimcale • August 18, 2012Waxaan hambalyo u dirayaa dhamaan akhristayaasha Somaliska, guud ahaan Soomaalida ku nool wadanka, caalamka iyo dhamaan Muslimiinta. Waxaan leeyahay ciid wanaagsan. Kullu caiman wa …
Aabayaasha oo dagaal ugu jira masuuliyada caruurtooda By Jimcale • August 14, 2012Waalidiinta isku qabsata masuuliyada caruurta ayaa soo siyaadaya sida lagu soo bandhigay warbixin ay qortay idaacada Sweden. Marka ay kala tagaan aabaha iyo hooyada …
Maxamud waxa uu doonayaa in uu wax ka badalo aragtida Soomaalida By Jimcale • August 13, 2012Mohamud Salad waa nin dhalinyaro ah oo doonaya in uu wax ka badalo aragtida laga qabo Soomaalida iyo sida Soomaalidu Sweden ku nool ay …